China Mercedes Benz Car Video Broshuọ & Kaadị, LCD ihuenyo Kaadị, A4 hazie Printing maka Car Nkwalite rụpụta na Factory | VideoBrochure
43 inch nke ala guzoro magi ...
F9 Tws 5.0 Ezi Ikuku HI ...
LCD ihuenyo video broshuọ p ...
Snyịnya ibu ahaziri 10 nke anụ ọhịa ahụ ...
Astrazeneca 7inch obere ...
Mercedes Benz Car Video Broshọ & Kaadị, LCD ihuenyo Kaadị, A4 hazie Printing maka Car Nkwalite
1. A pụrụ iji kaadị broshuọ vidiyo n'ọtụtụ ọrụ maka ịkwalite azụmahịa. Okwesiri ka ulo oru obula dika Real Estate, Medicine, Onyinye Mmụta. Wdg…
2. E jiri ya tụnyere broshuọ ngwaahịa ọdịnala, enwere ike iji kaadị ekele anyị vidiyo mee vidiyo, egwu na eserese.
3. nwere ike ime ya site na iji aka gị mepụta. nkà pringting na vidiyo jikọtara na broshuọ vidiyo anyị. Ọ na-enwe mmetụta na-adịgide adịgide na ndị ahịa gị.
1. A pụrụ iji kaadị ekele vidiyo n'ọtụtụ ọrụ maka ịkwalite azụmahịa. Okwesiri ka ulo oru obula dika Real Estate, Medicine, Onyinye Mmụta. Wdg…
Ihuenyo LCD Digital LCD 2.4 inch, 4.3 inch, 5 inch, 7 inch, 10.1 inch
Batrị na-agbanye ọkụ 300mAh / 400mAh / 500mAh / 650mAh / 1000mAh / 1500mAh / 2000mAh / 3000mAh
Nchekwa 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB
Bọtịnụ Volume +, Volume-, Play / kwusi, Fastward, Weghachi, Nhọrọ vidiyo (nhọrọ)
USB Port Obere USB ọdụ ụgbọ mmiri --- 5 Pin, 2.0 Mocro USB n'ọdụ ụgbọ mmiri --- 5 Pin, 2.0
Gbanye Ndọta mgba ọkụ Ike ON / Gbanyụọ
Mbipụta CMYK 4 agba Pan-ụda Agba pụrụ iche
Nhazi vidiyo AVI, MP4, RMVB bụ ndị ọzọ.
Emecha Abù UV, foil, Silver, Gold wdg (Matte na Kenkowaputa Lamination gụnyere)
1. Anyị na-eme mgbanwe dị iche iche maka kaadị ekele vidiyo:
Magnetik ịgbanwee: mgbe ị na-emeghe ngwaahịa, Ọ nwere ike na-egwu video na-akpaghị aka; You mechie ya, ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ
On / off button switch: ị nwere ike itinye ma ọ bụ gbanyụọ bọtịnụ, mgbe ịpịrị ya, ọ malitere ịrụ ọrụ; mgbe ị pịrị ya ọzọ, Ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ
Mgbanwe ihe mmetụta mmegharị: Ọ na-amalite ịrụ ọrụ mgbe ị gafere n'ihu ihe mmetụta ngagharị, Ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ mgbe ị na-apụ.
2. Enwere ike ịgbakwunye kaadị ekele vidiyo ọtụtụ bọtịnụ ọrụ: egwu / kwụsịtụ, nke gara aga, nke ọzọ, olu elu, olu olu, ịgbachi nkịtị, ịmalitegharịa, bọtịnụ vidiyo (kpọọ vidiyo ịchọrọ), bọtịnụ eserese, bọtịnụ egwu wdg.
3. can nwere ike bulite vidiyo, egwu na faịlụ eserese n'oge ọ bụla ịchọrọ. Nwere ike iji kaadị ekele vidiyo dị ka U-Disk. Mgbe i jikotara broshuọ vidio anyị na kọmputa ma ọ bụ ihe nkwụnye ọkụ, Ọ ga-agbanyeghachi.
4. Mgbe ị na-agbanye kaadi kaadị vidiyo, biko mechie ngwaahịa ahụ. Ọ dị mfe na-emetụta mmiri mmiri. Zere ya na mmiri.
5. A na-akwado touchscreen ahụ maka 4.3 nke anụ ọhịa ahụ, 5 nke anụ ọhịa ahụ, 7 nke anụ ọhịa na 10 nke anụ ọhịa vidiyo.
6. Nkịtị ngwaahịa anyị bụ nha A4, ogo A5, a nabatara nhaziri ahaziri. Can nwere ike ime ya na nha ị chọrọ.
7. You nwere ike ịhọrọ nha ihuenyo, oke batrị na nha ebe nchekwa dịka ịchọrọ. Akwụkwọ nta vidio anyị nwere ọnụahịa buru ibu. Okwesiri ndi ahia nile.
8. Omenala imewe gị họrọ, dị ka embossed, na-ekpo ọkụ zọ na gold ma ọ bụ na sliver wdg ...
9. Sistemụ akwado: WIN7, WIN8, XP, Mac, wdg…
Olee otu broshuọ vidio ga-arụ ọrụ?
Dika mmadu mepee Broshuọ Video, ọtụtụ ihe na-akpali ya: ikiri vidiyo, gbanwee vidiyo, rịọ maka ozi ndị ọzọ wdg. Nke a bụ site na arụmọrụ bọtịnụ agbakwunyere, nke ị nwere ike itinyekwu. Nke a na - agbakwunye ọtụtụ mmekọrịta mmekọrịta nke anaghị ahụ na broshuọ ọkọlọtọ. Na mgbakwunye, ị na-enye onye ahịa / onye ọrụ ikike ịza oku na-eme ihe, na-erite uru azụmahịa gị.
Gịnị bụ broshuọ vidio?
Akwukwo Broshuọ ma ọ bụ Kaadị vidiyo na-ebipụta nkwakọ ngwaahịa nwere obere ihuenyo LCD, obere okwu na batrị na-agbanye ọkụ yana njikọ USB nke na-enye ohere maka mgbanwe vidiyo na ntinyeghachi nke otu. Broshọ vidiyo dị mma maka ngosi,
na-akpọ, PR, mgbasa ozi ahịa na mgbasa ozi. Broshuọ Vidiyo ahụ mepụtara echefu echefu maka nkwalite gị.
Akwukwo akwukwo vidiyo nke IDW:
→ Factory Direct Ahịa.
Products Patent ngwaahịa, onwe aghụghọ.
Ntụkwasị Obi Dị Mma.
Ọkachamara Teknụzụ & Ọrụ.
Lead Oge Ndu Ọsọ.
→ Ndenye Logo visual na-egosi.
Okwu ọsọ ọsọ.
→ Achọpụta ndị ahịa.
1. Zaghachi ajụjụ gị na oge ọrụ 24.
2. Ndị ọrụ aka nwere azịza ajụjụ gị niile n ’bekee.
3. Factory kpọmkwem ahịa, elu àgwà ngwaahịa na ọkachamara ọrụ.
4. ngwaahia imewe dị.
5. Mmega ahụ na azịza pụrụ iche nwere ike ịnye ndị ahịa site n'aka ndị ọrụ anyị a zụrụ nke ọma.
6. Mgbe erechara ọrụ na teknụzụ -support dị.
7. Akwụkwọ ikike oge: 1 afọ.
Na ọkà ọrụ na-aga n'ihu na-emepụta technology improments, anyị nwere ike inye anyị ahịa elu àgwà ngwaahịa nke afọ ojuju site ahịa anyị.
Anyị na-elekọta ọ bụghị naanị ihe eletrọniki, kamakwa ị na-ebipụta agba, ịnwụ ọnwụ, ịgbakọta na ihe ndị ọzọ iji jide n'aka na anyị na-enye ndị ahịa anyị ngwaahịa kachasị mma.
Mbukota & Mbupu:
Katọn siri ike maka mbupu nchekwa-Anyị na-eji katọn ndị siri ike nke ga-edebe ngwaahịa ahụ n'enweghị nsogbu mgbe ị na-ebugharị. Ọzọkwa, e nwere oke ajị anụ pel dị n'etiti ngwaahịa na ngwaahịa iji chebe ngwaahịa ahụ.
Nke gara aga: Colgate New Business vkù LCD Broshọ Onyinye Digital TFT ihuenyo Video kaadị Kaadị
Osote: Mpempe akwụkwọ azụmahịa azụmahịa Astrazeneca 7inch nwere obere azụmaahịa azụmaahịa kaadị kaadị azụmahịa
Astrazeneca 7inch obere Azụ siri ike video busi ...
Smart 8 Inch osisi Digital Calendar Day Elekere Id ...
F9 Tws 5.0 Ezi Ikuku HIFI stereo ekweisi Ea ...
ahaziri 7 inch LCD ihuenyo ìhè akara musi ...
Digital Wall Elekere WiFi Smart Weather Days Cloc ...
Universal Automatic clamping Qi Ikuku Car Car ...